Antony Raj Jayamani muteveri wedu kubva kuLinkedin | Mabasa - Basa - Rwendo Rwekufamba Dubai!
Antony Raj Jayamani muteveri wedu kubva kuLinkedin. Akakwanisa kutumira kwatiri email inokurumidza neyake yakagadziridzwa foto kubva Dubai.
Apa ndauya kuenda kuDubai ndokutanga basa rangu musi waMbudzi 5th 2018. "Pandiri kuuya kuDubai, ndakanga ndiri zero uye ndisina kana kumbobudikira pachena pamusoro penyika. Mushure megore Dubai anondiita murume uye akandipa chivimbo chakawedzerwa ndikawana rumwe ruzivo. Dubai yakandiratidza mwenje kubva kunerima chikamu chehupenyu mune rangu basa. Ikozvino zvava kuita semba yechipiri, ndinofarira kugara muDubai. Ndinoshuvira kubudirira kwese kwakanaka kukura kweDubai. Ini ndinotenda zvikuru nepuratifomu iyi kufumura yandakadzidziswa.
Nei Antony achisarudza Dubai?
Hapana mazwi anogona kutsanangura Dubai nemutungamiri wayo. Vakawanda expats kubva kuIndia vakashanyira Dubai nguva dze2 uye vanoshuvira kuti vaende kunogara uye kushanda ikoko. Zvese zvakangofanana uye zvakatsiga. Zvakafanana neDenga repasi.
Vanhu vazhinji vanofara. Tese tinoshuva kuti nyika dzekumba kwedu dziratidzika senge United Arab Emirates. Uyezve, kudzorwa seMutungamiriri weDubai vachitevera semuenzaniso weVanofanira kuva nevagari vemo. Dubai ine Nyika yese mairi. Ah, Dubai yakanakisa nzvimbo yekugara hupenyu hwako mukati. Isu tese tinoshuva kuti dai tawana Joabhu ipapo seMugadziri wechiitiko kana maneja.
Kune zvakawanda zvakawanda zvinotyisa ipapo!
Dubai iguta rebhizinesi, nepo zvichitaurwa izvo pawakabhururuka uchienda kuDubai uye unoshanda pano. Hauzombonzwa kusurukirwa, vanhu vane mutsa chaizvo, vakadzidza uye zvichingodaro. Kutanga nekuvhima kwebasa kungave kushoma, nekuda kwemakwikwi pamusika wanhasi. Uye izvo zvakatungamira vanhu kuti vasarudze chinzvimbo nekuchenjera uye vanhu vane ruzivo vane ruzivo vachazopihwa zvimwe zvido yebasa riri nani.
Uye nepo fresher haichatombonakidzwa, saka kana iwe uri mutsva gadzirira, nyatso gadzirira, kuitira kuti mamwe makambani akwanise kupa huwandu hwenhamba panzvimbo yekuisa huwandu hwakawanda mukubhadhara nyanzvi. paunovhima basa kuDubai uve nechokwadi newechokwadi mawebhusaiti. Mamwe mawebhusaiti ekufungidzira anogona kukutevera pasi pemapapiro avo uye kubvunza mari, nepo hapana makambani aizokumbira mari chero ipi zvayo yekushandira.
Dubai haisi nyore kuti uwane basa raunoda
Kupfuura zvese, ndingati hazvisi izvo nyore kutunda nebasa raunoda, panzvimbo pekutora chinzvimbo-chinzvimbo chinzvimbo chero indasitiri yaunoda. Zvino kana wapedza chibvumirano chako chekutanga navo edza kunyorera kune imwe chinzvimbo muUAE. Uye iwe uchazonyatsowana chako chaunoda chinzvimbo mushure mekunge iwe uine sampu huwandu hwechiitiko muDubai.
DUBAI, musikana wangu maziso, iwe uri Dream, Unique, Beautiful,
Isu tose tinoda Love Dubai City!
Dubai ndeimwe yeiyo mabhizinesi maguta ano muMiddle East. Iko kusanganisa kwe muIndiya uye Pakistani, zvakare, Iranians uye omuPhilippines expatriates. Guta iri nzvimbo yemazuva ano, yemazuva ano uye inoyevedza uye nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinenge chero vanhu vose.
Zvinoshamisa kuona tsika dzakawanda dzakasiyana munzvimbo imwechete uye kusvika ziva tsika yeArabhu panguva imwe chete.
Kune nzvimbo dzakawanda muguta rekutsvaga uye nekunakidzwa. Nhasi tichaona maresitorendi nemabhawa. Nzvimbo inonakidza kwazvo ndeye Dubai Marina, inzvimbo izere nemarestaurant akanaka uye nemazariro ane runako rwe hotera yakanaka Burj Al Arab. Iwe unogona kunzwa nharaunda yechiArabic yekune dzimwe nyika kuyedza chiArabic chikafu chaicho uchinge uchinge uchinge uchishandiswa -pamhepo dhizaini yekuputa nemakonzo akasiyana. Barista inzvimbo yechipiri iyo izere nemabhawa akanaka uye cafeterias iwe aunogona kunakidzwa kusanganisa nevanhu vazhinji kutenderera nyika uye kuva nenguva yakanaka.
Pane zvinhu zvakawanda zvekuita kuDhaibha
Nzvimbo yechitatu ndiyo chikwata Armani in Burj Khalifa. Fancy kirabhu ine nharaunda yakanakisa, mimhanzi yakanaka uye inonaka cocktails. Uye isu ngatirege kukanganwa Dongo. Kana usati waenda ku renje ipapo iwe hauna kuenda kuDubai. Kuenda rwendo rwegwenga ndechimwe chezvakanakisa zviitiko. Kusvetuka nemotokari buggy pajecha, kukwira ngamera, kudya kwemanheru uchiona kutamba kwechiArabhu kuri chisingakanganwiki chiitiko icho chinofanirwa kuita kana uchishanyira Dubai.
Asi nezve izvi, ini ndicharatidza mune inotevera chinyorwa uko isu tichaona renje uye zvakafanana nekutenga muDubai. Iri iguta rakahwanda nzvimbo dzakawanda dzinoshamisa uye zviitiko zvekuongorora. Dubai nderimwe remaguta anonakidza uye ane hupenyu munyika.
Ramba uchitarisa nokuda kwechiitiko chinotevera!
Dubai inozivikanwa seguta rebhizinesi, nepo zvichinzi Mamiriyoni evanhu anobhururuka achienda kuDubai kuti awane mabasa kana mabhizinesi madiki uye haazombonzwa kusurukirwa sezvazviri vanova imba yavo yechipiri. Vanhu vane mutsa chaizvo, vakadzidza uye pane zvakawanda zvekutarisa muDubai.
Dubai iri kukura zuva nezuva, makore apfuura ayo achinja zvakanyanya, Expo 2020 iri pamberi apo nyika dzinopfuura 190 dzichatora chikamu muna Gumiguru 2020 inotevera. Kuvaka Metro muDubai kunoita kuti kufamba kwakanyanya kuve nyore, kuwanda kwemigwagwa kunounza kushushikana uye vanhu vanosarudza metro. pane kubata bhazi kana tekisi, kunze kweiyo Dubai ine yekupedzisira-yemazuva ano yekuvakisa uye ine hupenyu hwusiku hwenzvimbo inoitika, akawanda eresitorendi kusarudza kubva vanhu veDubai yakakura-nguva chikafu, iwe unogona kuwana kuedza kwakawanda se cuisine kubva kumativi ese epasi.
Dubai inozivikanwawo seimwe remaguta akachengetedzeka munyika, nepo hutsotsi huwandu hwakafanana zvishoma, uye Dubai ndiro chete guta munyika kuve ne Exclusive Supercars, inodzokera munguva iyo vanhu muDubai vane rudo rwakanyanya nemotokari, kuti zviite zvinonakidza mapurisa eDubai vakawedzera supercars kune yavo ngarava iyo inosanganisira Buggati, Aston Martin, Roll Royce, uye zvimwe zvakawanda. Dubai inozivikanwa zvakare neyeMutungamiriri hub, nepo mavhiki emuMutambo wemuvhi, Mubairo Ceremony inoitika makota
Vatambi pasi rese rinogeza kuda Dubai uye kero seimba yavo yechipiri, vanouya kuno kuzotenga, kusangana uye kukwazisa nevaperekedzi uye nekupfura mafirimu kunyanya munzvimbo dzeBreathtaking seBurj Khalifa, Burj Al Arab, uye Jumeirah Mabvi, Kunze kweye showbiz, Zvishoma vedu vanoziva kuti Dubai inoita nerudo pamwero wakakura, vanhu vari muno vanotenda kugovera kune hanya, vanowanzobatsira Varombo parwendo, pese pavanosangana chero mishaps avanosvika mukati mavo hapana nguva yekuita chokwadi.
Mutongi weDhailand HH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum neHollywood actor Tom Cruise (Business Arabia)
Dubai inongowanikwa kune vanotsvaka basa here?
Vanotsvaga vebasa muDubai vanogona kurarama uye kudya zvemahara mune dzimwe nzvimbo, nepo vanhu veDubai vakatambanudza maoko avo kubatsira vanotsvaga basa sekukwanisa kwavo, vanhu vaizotanga kufunga kana zviri zvemahara, hazvisi zvemunhu wese kana ndati mahara, pane vamwe vanhu venzvimbo vanobata vanhu vanotsvaga basa zvakanaka, Izvi zvinoratidza huwandu hwevanhu muvanhu vanoedza kubatsira vanoshaya.
Kana kunyange kana iwe uchifanira kugara mu bachelor space une zvakawanda zvaunogona kusarudza nemitengo yakapusa neyevhisi service, kune mahotera anowanikwa zvakare kune dzimwe nzvimbo apo mushandi webasa anogona kusiya kwechinguva zvichienderana neVisa dzako, usati wabhururuka uchienda kuDubai, unofanirwa kuita tsvakiridzo yakakodzera kunyanya kune vanhu vanozviwana vari mutorwa muguta, kune avo vane shamwari kana mhuri vanogona kuwirirana.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva nezve Dubai traffic traffic, chenjera paunenge uchiyambuka munhu anofamba netsoka iwe unogona kupedzisira wave kubhadhara hefty for not following the mitemo, kurasa marara munzira, kupfira mate mumigwagwa mikuru kunogona kukuwisira mudambudziko, saka svinura uye dzivirira zviitiko zvakadaro, nguva dzose inofanirwa kutakura vhiza vheti kuva parutivi rwakachengeteka semapurisa anogona kukuendesa iwe muchitokisi nekuda kwekusachengeta magwaro ako akakodzera kusvika uine ID yeEmirates, iwe uchave uchiri kuiwana mushure mekutora basa, izvi ndizvo zvimwe zvinoita uye zvisingaite.
Nzira yekutangira basa kutsvaga muUAE?
Kutanga nekuvhima kwebasa kungave kushoma. nekuda kwemakwikwi mumusika wanhasi-akatungamira vanhu kusarudza chinzvimbo zvine hungwaru, kune vanhu vanobva munyika dzakasiyana siyana vane matarenda mazhinji, hunyanzvi uye vanhu vane ruzivo vane ruzivo vachazopihwa zvimwe zvekuda chiri chokwadi.
Nekudaro, neapo kunge kuchiri kutsva hakuchawanzovarairwa, saka kana uri mutsva gadzirira iwe, iva zvirinani shanda wakagadzirira kuitira kuti mamwe makambani akwanise kupa lump-sum huwandu pane kuisa hurefu huwandu pakushanda vepakati nyanzvi, uye vamwe vatengi vanoteedzawo pasi vanotsvaga basa muKuwait.
Freshers zvakananga, kunze kweizvozvo kana iwe uchivhima iwe basa kuDubai uve neshuwa kwewechokwadi mawebhusaiti, mamwe mabhusaiti ekufungidzira anogona kukutevera iwe pasi pemapapiro awo uye kukumbira mari, nepo pasina makambani angabvunza mari chero rudzi rwekudyara kana iwe ukazviwana iwe uri mune imwe yeaya mamiriro ezvinhu chenjera.
Kuti udzivise zviitiko zvakadaro unofanirwa kuve nechokwadi iwe Google mahofisi avo uye kuverenga kuverenga pamhepo kuti iwe uve nokuzadzikiswa uye iwe uchawanawo vamwe vashandi vekubasa nepo vanoronga kubvunzurudzwa kwevanokwanisa kukwikwidza sekuenderana nebasa rako rine chekuita nebasa uye ndokumbira imwe chikamu chemubhadharo wako wekutanga chete kana iwe uchisaina tsamba yekupihwa, icho chinhu chakanaka kuva akatendeseka, sezvo ivo zvakare vaine zvisungo nevekambani vanoita kuti basa rako riwedzere nyore, saka ivo vanhu chaivo usanetseka nezvekunyengedza pano sezvavari pano kubatsira Freshers.
Shandisa chete zviitiko zvemabasa muD Dubai!
Iwe uchauyawo uchiona CV Distribution Services mu UAE, ini pachangu ndinokurudzira kusasarudzira iyo nekuti vanongogovera CV yako to general email ids dzezvekambani kambani izvo zvinowanikwa pamusoro pavo mawebhusaiti kana kuti LinkedIn account, nepo iwe uchigona zvakare kuita zvinhu zvakadaro nekutsvaga email ids pane avo anotevera webhusaiti.
Mazuva ano muAFA Kugadzira mapepa enhema zvave chinhu, kuunza mari kuburikidza nevanhu vasina mhosva, vanhu vaya vanobva kumaguta akasiyana vanowira mumusungo wavo nyore, vasina kana kumbofunga kana vangobhadhara huwandu hwakawanda kutarisira basa uchidzosa, zvishoma zvavanoziva nezve hunyengeri uhu Dubai anogara achitevera vanhu avo uye anotumira meseji yekuzivisa kuAEE kuti aponese vanhu kubva mumabasa ekunyengedza muDubai.
Pamusoro pezvose ndaizoti hazvisi nyore kutunda nebasa raunoda, panzvimbo pezvo tora chinzvimbo-chinzvimbo chinzvimbo chero indasitiri yaunoda, kana wapedza chibvumirano chako chekutanga navo edza kunyorera kune imwe chinzvimbo uye tanga tsvakurudzo yako iwe uchazonyatsowana chako chaunoda chinzvimbo, ruzivo rwunodzidzisa zvinhu zvakawanda, zvinowedzera chivimbo chako, iwe unenge uchigadzira hunyanzvi hwako hwebasa uye zvimwe zvakawanda. Saizvozvo, batsira vamwe, ita network, sangana nevanhu vatsva mazuva ese vatsvage rubatsiro kubva kwavari uye iwe zvechokwadi uchadzika basa muDubai, UAE.
Zvisinei, kana paine chero basa rinoenderana neprofessi yako, ndapota edza kurova HR maneja ASAP. Iwe unofanirwa kunge wakagadzirira kupa yako masevhisi mukutengesa & kushambadzira / vatengi kuchengetedza sevhisi / Retailing mabasa kana chero chinhu chakakodzera basa raunopihwa iwe.
Zvizhinji zve hope dzemutorwa basa muGCC Nyika kukwidziridza mikana yavo yebasa. Uye iwe unofanirwa kurova uchida kushanda chero kupi muGulf nyika nzvimbo dzakaita seDubai / Qatar / Oman / Abu Dhabi / Bahrain / Kuwait etc.
Chero bedzi ivo vachikupa iwe basa munharaunda yeGulf. Saka, kana wanga uchikumbira mabasa mumasaini epamhepo emakore ekupedzisira 4 / 5 makore pasina mhedzisiro. Edza kurova zvishoma zvishoma. Ita zvekarezve kusvika kumatambo edu uye tanga kutarisira mberi kuwana mhinduro yakanaka kubva ku "Dubaicitycompany".
Kwenguva yandaigara muDubai, yainzi imba
Mukufamba kwemakore yakanyura pasi mumapfupa angu.
Dubai haina kuzombotaridzika seyakaremara.
Miniti yega yega yaishandiswa yaikosheswa.
Zvaiita sekutarisa musikana wechidiki achikura kuva mukadzi akanaka
Vatema & nevachena, vadiki & vakuru, vese vaive glued vakatarisa izvi zvakanaka mukadzi anokura.
Segungwa rine usimbe rinogunzira mahombekombe.
Dubai yakaunza rudo rwese pamberi.
Uya ku Dubai ..
Mukana mukuru unokumirira iwe!.
- Mutsva wokudzidza? Iwe uchava nyanzvi inokura.
- Mid-career? Mhuri yako ichave yakachengeteka mumutambo wekusimudzira.
- Mukuru? Nguva yekukohwa izvo zvakanaka zvehupenyu-nguva yehunyanzvi.
Hazvina mhosva kuti uripi nhasi, tinotenda kuti unogona kuita mutsauko nhasi nekubatana nesu kuDubai. Guta redu rakanaka - uko renje rinosangana nedenga uye Innovation inotungamira masevhisi- ndiyo imba yako inotevera, kufamba kwako kukuru.
Huya uve chikamu cheGuta rechokwadi yakavakwa kuburikidza nemakore ekudziya emhuri, mufaro, kuomerwa, kusimba uye vagari-- gavhu zviitiko kugadzira hwaro hwakasimba hwehupenyu hwakanaka kune vese varume nevakadzi vanoshanda nesimba.
Tariro iwe uchasarudza se Antony Raj Jayamani muteveri wedu kubva Linkedin kuuya kuUnited Arab Emirates. Uye Dubai City Kambani inosangana nekutarisira kwako maererano kupa gwara rekushanda uye kugara muMiddle East.
Tevera Dubai City Company pa Linkedin like:
Antony Raj Jayamani muteveri wedu kubva Linkedin!
DCC kambani ikozvino kupa ruzivo rwekutsanangudza. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Jobs in Dubai Guides. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.